Homemade Ukrainian Isita keke "Isita" Art sens - mazano eimba nebindu
Homemade Ukrainian Isita keke "Isita"
24.03.2016 Yakatumirwa na: Art Sense
Chingwa cheUkraine chakagadziriswa chinonzi "Isita" (Isita, ChiUkraine). Iri izita munzvimbo zhinji dzekumaodzanyemba kweRussia, nepo munzvimbo dzekuchamhembe dzine zita racho Kulich. Pachinyakare, zita rekuti "Pasca" rinoshandiswawo mune mamwe maGypsy edhiyo uye mune chimwe chikamu cheMoldova, uko Pasika inotapira chingwa chine zvakare zita "Kozunak", sezvakaita muBulgaria neRomania. Miedzo, sezvataona kakawanda, inozivikanwa uye yakagovaniswa pasi rose, asi chiratidzo munharaunda dzechiKristu chinovapa kukosha kwakakosha. Pasca futi Kulich, Chowder, Tzureki, Kozunak, Mbudzi uye vamwe vazhinji seizvi vane nhamba yeve embodiments, asi hunhu ndehwekuti hahupindirane, uye sekudaro Panetone yakagadzirirwa kubva mukapfava wakapfava kwazvo usingakwanisi kuchengetedza chimiro chayo, saka yakabikwa mune yakareba cylindrical pani. Iyo yakagadzirirwa mumakasi akasiyana - kubva kune diki inoshumirwa kune wese munhu akapoteredza tafura, asi pane nguva dzose imwe huru kune munhu wese. Zvinotendwa kuti kana uchibheka, hapana mumwe kunze kwemuenzi anogona kusvika kuchitofu, anofanirwa kuramba akanyarara mukicheni panguva yekubheka, uye haifanirwe kugadziriswa neChishanu Chakanaka.
Zvembiriso:Mukaka 1 litita
Nyowani May - 100g. kana 35g. pakaoma
Denga - 700 c.
Shuwa - 2 / 3 h Zvehupfu:5 Mazai
4 h shuga
Vanilla, rum - yakasarudzika
Raisins 500 gr.
250 mafuta c.
2-3 mafuta omuorivhi kana mafuta
500 kirimu yakasviba (20%)
Flour 2 kg. Kupedzisa:Mapuroteni 3 pc.
Shuwa 200 c.
Matanda ane hura
Izvo zvakakosha kuti mukaka unodziya (kwete kupisa) uye kuti mbiriso yakanaka! Inofanira kuvhiyiwa mukamuri inopisa ine tembiricha iri pamusoro pe25 degrees uye zvese zvigadzirwa nemidziyo zvichidziya.
Tambanudza upfu! Dururira hafu ku2 / 3h mumukaka unodziya. shuga uye bvisa iyo. Kune mbiriso yakapwanyika, wedzera mashoma emukaka mutsva nehupuni hwehuni kuti uite slurry, iyo inozodururwa mumudziyo wemukaka. Zvishoma nezvishoma wedzera mune yakasviba hupfu, uchikurudzira zvinyoro nyoro nehupuni hwehuni kusvikira hukobvu hwakaomerera. Iwe haufanirwe kuisa yako yese 700g. Bvumidza mbiriso kupisa kwemaminetsi e30 kuwedzera huwandu hwayo. Pakati peino nguva, tora hombe yekusanganisa, nyorovesa zvinyoro uye ndokudururira mune mbiriso, kufukidza uye kubvumira iyo kaviri muhuwandu - inenge 15 min .. Simbisa nekuchenjera kubvisa iyo yakaunganidzwa dioxide, kufukidza uye chengetedza kudziya kwe 15-20 min. kudzokorora zvakare.
Rova mazai mashanu mushe panguva ino, wedzera maawa e4 shuga (kubva pa850 gr. kusvika 1kg.), ichipfuurira mberi kusvikira ichipera, wobva wawedzera iyo yakanyungudutswa asi kwete unopisa mafuta. Govanya zvakare kusvikira wanyatsosanganiswa uye wedzera kirimu, uchikurudzira zvakare kusvikira musanganiswa wakasarudzika wawedzerwa uye wobva wasanganiswa neapuni yematanda mune mbiriso pani. Svina kusvikira wanyorovera uye wobva wawedzera mazambiringa, ari nani kuruboshwe kuti anyore ne vanilla kana ramu kweanenge maawa mashoma kuti asanyanya kuoma. Zorora zvakare kusvikira mazambiringa akakwidzwa uye wedzera hupfu. Izvo hazvifanirwe kuisa pamapaundi maviri, asi zvichienderana nerudzi rwefurawa, iyo Pasco inogona kutora kubva ku1.7 kusvika kungodarika 2kg. Hazvina kunaka kupfuudza hupfu, sezvo huchawana yakaoma uye doughier paste. Sanganisa mune imwe chete nzira kusvikira zvakakwana homogenization, uye iwe unofanirwa kugamuchira yakaderera uye inonamira mukanyiwa. Wedzera mafuta kana mafuta omuorivhi uye kumutsa.
Dhavhara uye siya unodziya kweinenge 30min. kana kuwedzera kaviri vhoriyamu. Pakati peino nguva, gadzirira mafomu akafukidzwa zvakasimba nepepa rekubheka. Kugadzirira-kushandisa-kadhibhodhi Panetone yekubheka trays inowanikwawo. Sakanidza mukanyiwa zvakare uye zadza mafomu nokungwarira. Chimiro chega chega chinofanirwa kunge chakazadzwa kusvika hafu kana zvishoma kudarika urefu hwayo.Fukidza nejasi uye nzvimbo munzvimbo inodziya. Kana mukanyiwa wakawedzera huwandu hwayo kusvika ku2 / 3 pakukwirira, chihure neshiri yakarohwa uye woisa muvheni inodziya 150-160 oven, iyo inogona kupera kuderedzwa ne5-10 degrees. Iyo nguva yekuzadza uye kunyange yekubheka zvinoenderana nezvakawanda zvinhu, asi kazhinji inenge iri kutenderera 40-50 min .. Unogona kuvhara nepepa rakanyoroveswa kana foil kudzivirira kupisa kubva kumusoro kana uchibika pamadhigirii akakwira. Tarisa kuwanikwa kwacho nehuni. Bvumira kutonhora uye nekuchenjera kubvisa kubva fomu. Kurova mapuroteni neiyo icing shuga uye kufukidza tambo. Shongedza sezvaunoda. Kana iyo glaze yaoma iwe unogona kushongedza mu tray nemazai eIsita.
Homemade weevil, weasel, Pasika wePaseka, makwenzi ane mazambiringa akaomeswa, chingwa chembudzi, mazano anotapira, Isita, Isita, gadziriro yekubikira, nzira yekuzeya, Ukrainian weasel, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Isita yemaruva puppy
Kune akawanda, uye pamwe mazana, emapikicha ekugadzira makeke eIsita, asi ...
Tsika yechiPutukezi Folar da Pascoa
Chingwa chinongedzo pakati pemunhu nepasi, uye zai chiratidzo chechinyakare chekubereka nekupikiswa ...
ChiCroatia weevil chinogona kugadzirira nenzira dzinoverengeka uye mune dzinoverengeka ...
Russian Isita keke "Kulich"
Sezvinoita munharaunda dzese dzechiKristu, chinotapira chingwa chechingwa chinobatanidzwa, saka ...
Tsika yechiJudha inotapira chingwa Hala
Hala (x) (Chihebheru - חלה) chingwa chakawanda kwazvo chembudzi chine mazita mazhinji uye ...
Brioche is a classic French pastry iyo yakafumiswa nechingwa che iced. Mu ...
Makeke anotapira esame tahini akawandisa muTurkey, Greece, Armenia ...